| ६:००:४६ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल फागुन २७ गते । बिहीबार । इ.स.२०२१ मार्च ११ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । फागुन कृष्णपक्ष । तिथी– त्रयोदशी,१४ बजेर ५२ मिनेट उप्रान्त चतुर्दशी । नक्षत्र–धनिष्ठा,२२ बजेर ०१ मिनेट उप्रान्त शतभिषा । योग– शिब,१० बजेर ०० मिनेट उप्रान्त सिद्ध । करण– वणिज,१४ बजेर ५२ मिनेट उप्रान्त भद्रा,२६ बजेर ४८ मिनेट उप्रान्त शकुनि । आनन्दादिमा–श्रीवत्स योग । चन्द्रराशि–मकर,०९ बजेर ४९ मिनेट उप्रान्त कुम्भ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर २० मिनेटमा,सूर्यास्त १८ बजेर ०९ मिनेटमा । दिनमान २९ घडी ३२ पला । महाशिवरात्रिव्रत, हलेसी महादेव, पशुपतिनाथ लगायत शिवमन्दिर भयका ठाँउमा मेला,शिलाचहेपूजा, धनिष्टा पञ्चक प्रारम्भ ९ः४९ ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- मायाप्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । दाजुभाईले तपाईको काममा आर्थिक सहयोग गर्ने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । ईच्छा तथा मनोकामनाहरु पुरा हुनेछन् । दिगो काम गरी आम्दानिका स्रोत बढाउन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ भने आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला हुनेछन् । शेयर बजारमा गरिएको लगानीबाट भनजस्तो आम्दानी हुनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन पाईनेछ । नयाँ काम पाउने तथा व्यापारमा प्रसस्त आम्दानी हुनाले आर्थिक स्थिती सुदृड हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । अध्ययनमा राम्रो सफलता हात लाग्नेछ । प्रणण सम्बन्धको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पैत्रिक सम्पती तथा सरकारी सम्पतिको प्रयोग गर्न पाईने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । मन्दिर तथा धार्मिक प्रतिष्ठान तिरको यात्रा गरि टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्न सकिने छ ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- काम बिग्रने तथा मान सम्मानमा आघात पुग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनेछ । पढाइ लेखाइ तपाई आफ्नै कारणले बिग्रनेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर चासो रहेपनि गलत व्यात्तिहरुले प्रयोग गर्न सक्छन् ध्यान दिनुहोला । यात्रा गर्दा बिशेष ख्याल गर्नुहोला समस्या आउन सक्छ । शैक्षिक यात्रा धार्मिक यात्रा भने फलदायी रहनेछ ।
कर्कट ( ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- बिहानको समय राम्रो रहेकोले एकल तथा साझेदारी व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । पढाईलेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुनाले आफन्त तथा अग्रजहरु खुशि रहनेछन् । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्यम रहेकोले सोख तथा बिलाशीताले खर्च बढाउनेछ भने आम्दानी कम हुनेछ । असम्यम् व्यवहारले समस्या निम्त्याउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आलश्य तथा अस्वस्थताले लक्ष्यमा बिलम्ब हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- चलि आएका परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुन सक्छ। विशेष समारोहबीच प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइनेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिलो भएर जानेछन् । छोटो दुरिको धार्मिक यात्रा हुनेछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- कुनैपनि प्रतिस्पर्धामा तपाईंको नम अग्र स्थानमा आउनेछ । बिछोड भएका आफन्त हरुसँग भेट घाटले मन प्रफुल्लित हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आय आर्जनका स्रोतहरु बढ्नेछन् । सरकारी कार्यालयमा सामान सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने मनग्गे आम्दानी हुनेछ । प्रेममा नजिक हुने योग रहेकोछ । पुराना ऋण तथा रोगबाट छुटकारा पाईने समय रहेकोछ । कुटुम्ब तथा मावली पक्षबाट सहयोग पाईनेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जानेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। अप्रिय समाचारले दुःखी बनाउला। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिए पनि लगनशीलताले बिस्तारै प्रगति हुनेछ। बौद्धिक कार्यबाट थोरै भए पनि लाभ हुनेछ। व्यवसायिक काम बीचमा अवरुद्ध बन्न सक्छ। सन्तान वा अनुयायीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। धार्मिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- बिहानको समय राम्रो रहेकोले आफन्त,दाजुभाई तथा अग्रजहरुको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममूखी काम गर्न सकिनेछ । छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ । उत्पादनमूखि व्यवसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्यम रहेकोले स्वास्थ्यमा देखिने समस्याका कारण काम गर्न नसकेजस्तो हुनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काममा समय खर्चनेहरुका लागी समय मध्यम रहेकोछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – दौडधुप तथा लामो खटाईले मात्र कामरु सम्पादन हुनेछन् । पुराना मुद्दाहरुको निर्णय तपाईको पक्षमा नआउने तथा नया विवादमा फस्ने योग रहेको छ । उद्योग तथा व्यापारमा लगानी गर्ने अवसर आएपनि तत्काल भन्दा पनि पछिको लागी फाईदा हुनेछ । आफुभन्दा ठुला तथा प्रतिष्ठित व्याक्ति हरुसँग बिवाद बढ्ने योग रहेकोछ । तरपनि सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- बिहानको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडी छोडेर अग्र पंतिमा आउन सकिनेछ । परिवारका साथ रमाईलो वाताबरणमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मेहनेत गर्दा आटेको काम बन्नेछ भने जुझारु कार्यशैलिले लक्ष्य तथा गन्तब्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्यम रहेकोले खानपानमा ध्यान दिनुहोला । तरपनि धर्म तथा अध्यात्ममा ध्यान जानेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- बिहानको समय मध्यम रहेकोले अनाबस्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय व्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । मायाप्रेममा सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । मध्यान्हबाट समयमा सुधार हुने हुनाले बिभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने चाहेको समयमा कामहरु सम्पन्न हुने हुँदा आफन्तहरु खुशि हुनेछन् । सुन्दर तथा बिलाशि बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । उत्तम बस्त्र,मनपर्ने भोजन तथा बिशेष उपहार प्राप्तिको योग रहेकोछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- बिहानको समय उत्तम रहेकोले बैकिङ क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानी बढाउन सकिनेछ । प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ । मध्यान्हबाट साथिभाई तथा आफन्तहरुको भेटघाटले नयाँ काम गर्ने अवसर आयपनि फाईदाको लागी अली बढी मेहनेत गर्नुपर्नेछ । तरपनि धर्म सस्कृति तथा रितिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ । तपाईकाे दिन शुभ रहोस् ।
सौन्दर्य पेशाको भविश्य सुनौलो छ : वरिष्ठ सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित ६ मिनेट पहिले
दूध बिक्रीका लागि सङ्कलन केन्द्रतर्फ जाँदै ८ मिनेट पहिले
चन्द्रागिरिको मुनाफामा गिरावट आएसँगै घट्यो शेयरमूल्य १२ मिनेट पहिले
मध्यपहाडी लोकमार्गको क्रसर उद्योग १३ मिनेट पहिले
व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुदाँ कालीगण्डकी करिडोर निर्माण अलपत्र १३ मिनेट पहिले
संसदकाे चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य २४ मिनेट पहिले
न्यायिक समितिमा साधन र स्रोतको अभाव २५ मिनेट पहिले
भन्सार एजेन्ट छनौटका लागि परीक्षा मिति सार्वजनिक २६ मिनेट पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय २७ मिनेट पहिले
अनलाइन कक्षाका लागि शहरमै राम्रो पूर्वाधार छैन ३४ मिनेट पहिले
उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिँदै सकियो वासन्ती छठ ४६ मिनेट पहिले
के माधव नेपालले नयाँ दल खोल्दैछन् ? १ हप्ता पहिले
कोरोनाको सङ्क्रमणमा गाउँ फर्केका गाउँमै बसौँबसौँ वातावरण बनाउनुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल १० महिना पहिले
दरबन्दीका चिकित्सक बिदामा, करारका चिकित्सकको म्याद सकियो ११ महिना पहिले
बाँकेमा ६५ वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु ६ महिना पहिले